Fihomboan'ny covod-19 :: Olona telo matin’ny coronavirus tany Toamasina • AoRaha
Olona telo no namoy ny ainy avy amin’ny tsimok’ aretina « Covid-19 », any Toamasina, araka ny tarehimarika ofisialy navoaka, omaly. Dimy no fitambaran’ ny matin’ity valanaretina ity teto amintsika hatramin’izao. Nampahafantarina fa isan’ny nanafaingana ny fahafatesan’ireo olona telo ireo ny aretina nitaiza ny tsirairay avy.
Miha miakatra rahateo koa anefa ny isan’ny olona nifindran’ny « Covid-19 » satria marary vaovao miisa roa amby efapolo no voa. « Omaly (Ndlr : afak’omaly) no nindaosin’ny fahafatesana tao amin’ny hopitaly Morafeno, tany Toamasina, ny vehivavy iray, 52 taona sy ny lehilahy roa, 43 taona sy 73 taona, izay samy voan’ny diabeta avokoa. Isan’ireo narary mafy, nisehoan’ny soritr’aretina goavana indrindra, izy ireo », hoy ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny ofisialy momba ny tarehimarika amin’ny “Covid-19”, tao amin’ny onjam-peo sy fahitalavitra, omaly.
Nohazavainy fa samy taizana diabeta izy telo nodimandry ireo. Tsiahivina fa ilay lehilahy iray, 57 taona, no Malagasy voalohany matin’ny Covid-19 tany Toamasina, tamin’ny 16 mey lasa teo. Tamin’ny 18 mey lasa teo kosa no nahafaty an’ilay mpiasan’Ambatovy teratany filipiana.
Marary mafy sivy
Tamin’ireo tranga vaovao roa amby efapolo voatily sy voamarina fa voan’ny valanaretina dia any Toamasina avokoa ny sivy amby telopolo. Teto Antananarivo sy tany Tsiroanomandidy ary Moramanga ireo telo ambiny. Olona sivy amby roapolo sy dimanjato tamin’ ireo marary valo amby sivifolo sy eninjato nitondra ny « Covid-19 » no mbola manaraka fitsaboana any amin’ ireo hopitaly sy ivon-toerana samihafa.
Sivy kosa ireo olona marary mafy, samy any Toamasina ihany koa, raha ny tatitra ofisialy, omaly. Efa navoaka tao amin’ny efitrano fameloman’aina ireo marary mafy niisa efatra teo aloha. Vaovao tsara indray ny fisian’ireo olona folo vaovao sitrana soa aman-tsara. Valo tamin’izy ireo no tany Toamasina, iray teny amin’ ny hopitaly Anosiala ary iray tetsy Befelatanana.
Mahatratra 10 249 ny isan’ny fitiliana « PCR » vita, nanomboka ny 19 marsa hatramin’ny 27 mey lasa teo.
Fitaterana eto an-drenivohitra :: Havadika nomerika ny taratasy fahazoan-dalan’ny fiarakaretsaka
Fihanaky ny valanaretina :: Olona vaovao 128 nifindran’ny Covid-19 tao anatin’ny telo andro